Ka igwe okwu gị si adaghị onye ahịa ozi | Martech Zone
N'ụbọchị ochie nke ịzụ ahịa, laa azụ na mmalite 2000s, ndị CMO ole na ole nwere obi ike tinyere ego na ngwaọrụ ndị ezubere iji nyere aka ijikwa mkpọsa ha na ndị na-ege ntị. Ndị ọsụ ụzọ a siri ike chọrọ ịhazi, nyochaa ma melite arụmọrụ, wee si otú ahụ kee usoro teknụzụ azụmaahịa izizi - sistemụ arụmọrụ nke wetara usoro, mkpọsa ezubere iche, na ozi ahaziri maka nsonaazụ kacha mma.
Tụle etu ụlọ ọrụ ịzụ ahịa siri rute na afọ ole na ole gara aga dịka ịlele nke mpempe akwụkwọ akwụkwọ na akwụkwọ edemede na mmalite nke igwe obibi akwụkwọ izizi. Mgbanwe ndị a adịwo ngwa ngwa. Na 2011, e nwere ihe dị ka ụlọ ọrụ 150 na-enye teknụzụ ahịa. Ọnụ ọgụgụ ahụ abanyela ugbu a karịa 6,800 teknụzụ dabere na teknụzụ gụnyere mgbasa ozi dijitalụ, ahịa ọdịnaya, akpaaka ahịa, mgbasa ozi mmekọrịta, nchịkọta data na ọtụtụ ndị ọzọ.
Otu ụzọ, ndị na-ere ahịa ghọrọ ndị nchịkwa nchịkọta: ndị ọkachamara IT bụ ndị na-etinye oge karịa na ntinye teknụzụ karịa izi ozi, mmepe okike ma ọ bụ nyocha ndị ahịa. Azụmaahịa teknụzụ azụmaahịa ugbu a gafere karịa mmefu ego IT yana atụmatụ ịkwụ ụgwọ sọftụwia zuru ezu gafere $ 32 ijeri afọ a naanị.
Maka ụfọdụ, ọrụ ahụ dị ugbu a ihe ọ bụla ma nchịkọta.
Ndị na-ere ahịa taa na-enwe nrụgide a na-enwetụbeghị ụdị ya iji wuo ma jikwaa stacks. Teknụzụ na ụlọ ọrụ ngwanrọ na-achọsi ike ịchịkwa ọtụtụ nchịkọta dị ka o kwere mee. Otu teknụzụ dị n'ime ụlọ na-achọsi ike ijide oche ha na tebụl. Ọtụtụ mgbe, ndị ahịa na atụmanya na-ata ahụhụ n'ihi ya.
Na akụkụ, nke a bụ n'ihi asọmpi dị egwu n'etiti ndị isi sọftụwia ole na ole na-asọ mpi maka njikwa njikwa ahịa ahịa. Ha na-ele anya na ogige a gbara ogige nke nyiwe a haziri ahazi - nyiwe ha - na nsonaazụ, nwere obere ihe mkpali iji wuo n'ụzọ na-enyere ike ịkekọrịta na nkwukọrịta na ngwaahịa asọmpi ma ọ bụ nke mgbakwunye.
Nsogbu a kacha pụta ìhè na nchịkọta na nkesa nke ndị ahịa na nkwenye na atụmanya na mmasị - mmasị, ihe ndị na-adịghị amasị ya, ọwa nhọrọ, isiokwu ndị nwere mmasị wdg. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro teknụzụ ahịa na azụmaahịa niile a nke mejupụtara ike niile nwere ike ịnakọta ma chekwaa mmasị. Agbanyeghị, arụmọrụ ha pere mpe, ma ole ma ole n'ime ha ka emebere ka ha na teknụzụ ndị ọzọ kwukọrịta ma ọ bụ nye aka na ndekọ ndị ahịa zuru oke.
N'ihi ya, nkwenye ndị ahịa na mmasị ndị echekwara na ahịa CRM sistemụ anaghị akwaga na nkwado ndị ahịa, ahịa ma ọ bụ ndị na-eweta ndị ọzọ. Iji maa atụ, ikike doro anya ịkpọtụrụ ekwentị - dị oke mkpa maka ebumnuche nnabata - na-ebi n'ime ESP nke na-enweghị ike ijikọ azịza akpaaka ahịa.
Mgbe a jụrụ ha, ọtụtụ ndị ahịa na-echekarị na ozi ọkacha mmasị ndị ahịa ha na-esite na teknụzụ anọ dị iche na nke isii. Site na nyocha ndị sochirinụ, ekpughere usoro nke usoro 12-14 dị iche iche karịa okpukpu abụọ atụmatụ ha, yana kwa ihe akaebe doro anya nke nnabata miri emi na ahụmịhe ndị ahịa.
Ihe a niile nwere ezi uche na-atụle usoro nke ọ bụla dị mma na otu ihe karịa nke ọzọ.
Ọ bụrụ na otu nzukọ na-eji Salesforce, Microsoft Dynamics ma ọ bụ SAP, ha chọrọ ịgbaso ndị ahịa ha site na "ahịa" n'ọnọdụ - usoro nlekọta mmekọrịta ndị ahịa (CRM) a ma ama. A na-ahazi nyiwe ndị a iji mee ka ụlọ ọrụ na-ere ahịa nweta ozi ha chọrọ iji rụọ ọrụ ha - ghọta onye ahịa n'ofe ndụ ahụ ma nweta nghọta banyere ihe onye ahịa zụtara - ma ọ bụ nwere ike ịzụta - site na ụlọ ọrụ ahụ.
Mmasị na nnabata chọrọ ịchekwa akụkọ ihe mere eme - ikike ileghachi anya oge ka onye ahịa gbanwere site na nhọrọ kacha mma gaa na nke ọzọ. N'iji nlezianya na-atụ anya nke nyiwe ndị a, iji usoro CRM nwere ike ịhapụ gị foto zuru oke nke onye ahịa yana enweghị ozi ịchọrọ iji zaa ajụjụ nnabata.
Ọ bụrụ na otu dị iche iche na-arụ ọrụ ọrụ email dị ka IBM Watson Ahịa (nke a na-akpọkarị Silverpop), Oracle Nzaghachi or Oracle Eloqua ebumnuche bụ isi bụ iziga ndị ahịa nkwukọrịta ka ha gaa n'ihu na njem onye zụrụ ahịa, dabere na isi, omume ma ọ bụ ebumnuche ụlọ ọrụ. Ọ bụ ezie na sistemụ ndị a na-ekpuchi email dị ka ụdị nke nkwukọrịta mbụ, ọ ga-abụrịrị na onye ahịa ahụ na ụlọ ọrụ ahụ gafere ọtụtụ ọwa. Usoro ndị a anaghị enwe obi ụtọ, ma ọ bụ wuru ya, iji nye njikọta n'etiti akara aka na usoro ndị ahịa ọ bụla zutere.
Ndị ahịa na-atụ anya na mgbe ha nyere mmasị n'ofe otu ọwa, a na-ekekọrịta nsonaazụ ya na nzukọ ahụ. Obi nkoropụ dị mgbe onye ahịa chere na a naghị anụ ya. Mmasị ndị ekerịta na otu sistemụ kwesịrị ịgbasa n'ofe nkwukọrịta okwu gị niile na nghọta doro anya banyere isi mmalite mgbanwe a.
Ọ bụrụ na nzukọ ahụ na-adabere na usoro njikwa nweta njirimara ndị ahịa dịka SAP Ahịa Data Cloud (nke etinyere Gigya), Janrain or NbanyeRadius iji dozie nsogbu ahụ, ọ dị ha mkpa ilekwasị anya naanị na ebumnuche bụ isi ha iji ghọta ihe kpatara ha ji adaba. A na-ewu usoro ndị a iji nye ndị ahịa ohere dị mfe na ụlọ ọrụ ahụ na iji ghọtakwuo ha nke ọma (site na isi mmalite nke atọ, dịka ọmụmaatụ). Ike dị na nnabata njikwa arụmọrụ dị mma dị na mkparịta ụka na-aga n'ihu yana onye ahịa ka ọchịchọ ha gbanwere maka otu esi enweta ihe ha na-enweta na nkwukọrịta gafee ọwa ụlọ ọrụ niile.
Foto zuru ezu nke ndị ahịa gị chọrọ ihe karịrị naanị ozi ị nakọtara n'aka ha ruo taa. Ọ na-achọkwa na ha nwere enweghị ohere iji melite data profaịlụ ha na mmasị ha dịka ọnọdụ ha gbanwere. Ọ bụghị nchịkọta "oge". Ọ bụ ngwakọta nke usoro teknụzụ nwere usoro ewuru ewu nke na-atụle ndị ahịa na ikike ha isonye na mkparịta ụka kachasị amasị na ejiji na-aga n'ihu.
Kedu nsogbu nsogbu ndị ahịa na-eche ihu taa na sistemụ teknụzụ ndị a?
Ọ dịghị onye n'ime ha wuru na mmekọrịta ndị ahịa na-ebu n'uche n'uche maka njikwa, ndozi na nchịkọta nke data masịrị ma ọ bụ iji nye nkwado nkwado na ụlọ ọrụ ahụ.
Ndị ụlọ ọrụ na-enwe nchekwube mgbe niile ịchọta otu usoro nwere ike idozi mkpa niile nke nchịkọta ahịa, mana na-echefukarị na a na-akpọ ya "nchịkọta" maka ihe kpatara ya. Akụrụngwa ọ bụla na-edozi maka nsogbu ahịa pụrụ iche na nke a kapịrị ọnụ. Ọ dị mkpa ịtụle ihe nketa mbụ nke usoro ọ bụla azụmaahịa nwere ike ịtụle.
Tags: okwuenterpriseahia ulo oruibm watson ahiaogechinbanyenchịkọta ahịaOracleokwu eloquanzaghachisapSAP Ahịa Data Cloud
Eric V. Holtzclaw bụ Chief Strategist nke Ekwe Omume. Ọ bụ a na-eme nchọpụta, onye so dee, Oghere Usoro oru buu igba n'ulo na ịma aka-nke-ot amamihe. Lelee akwụkwọ ya na Wiley Publishing na njirimara ndị ahịa - Dergba :kwụ: Unkpọghe Omume Omume Ndị Ahịa. Eric na-enyere ụlọ ọrụ aka ịhazi ọrụ nke ọma na mmejuputa nnabata nnabata na nlekọta njikwa ọ bụla.